नफापेको या फाप्न नदिइएको नेपाली राजनिति - लण्डन काठमाडौँ
विविधMarch 29, 2020
नफापेको या फाप्न नदिइएको नेपाली राजनिति
युवा नेता , समाजसेवी
यो देशमा गौतम बुद्ध, मदन भण्डारी, बिपी कोइराला भनौं या स्व राजा बिरेन्द्र नैपनि अलिक लामो समय बाचेको भए हामीले तिनीहरूलाई पनि पत्तुर कवाडी बनाएर छोडी दिन्थ्यौं ।
यो देशमा कथित लोकतन्त्र फाप्दैन । हामी लोकतन्त्रका लागी लायक नै छैनौं । यहां जतिसुकै बहुमतको सरकार होस् जतिसुकै स्थिरताको नारा दिईयोस टिक्ने वाला छैन । ईतीहासै हेरौं न । काँग्रेसको दुईतिहाईको सरकार थियो टिक्यो? काँग्रेसको स्पष्ट बहुमतको सरकार थियो टिक्यो? बहुमतको पार्टीको हैसियतमा एमालेले सरकार बनायो कति टिक्यो? नौ महिना ? त्यसपछि शुरु भयो सांसद किनबेच देखी सुरा सुन्दरी काण्ड । यती सम्म कि नेमकिपा बाट निर्वाचित सांसदनै किनीदियो कांग्रेसले ।
एमालेको लोकप्रीयता बढेर एमालेले बहुमत ल्याउने अवस्थामा थियो एमाले नै फटाईयो । पछी कांग्रेस फटाईयो । माओवादी शान्ती सम्झौता गरेर मुल प्रबाह मा आए पछी भएको निर्वाचनमा माओवादी पहिलो शक्तिको रुपमा ऊदायो तर त्यही पार्टी बाट प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईलाई प्रयोग गरेर संसद बिघटन गरी अर्को चुनाव घोषणा गरियो ।
बाबुरामले बिदेशी प्रभुलाई खुशी पार्न, उसको चाकडी गर्न उसकै ईशारामा आफ्नो निजी स्वार्थ र महत्वकांक्षाका खातीर आंफै संलग्न भएको आन्दोलन र दल माथि गद्दारी गरे । पहिलो शक्ति माओवादी चुनाव पछी ज्यादै कमजोर तेश्रो शक्तिमा रूपान्तरण भयो, यो सबैमा बाबुराम राम्रै संग कसैको गोटी बनेर प्रयोग भए र अन्तमा कम्युनिष्ट आन्दोलन बाटै अलग भएको घोषणा गरे । यसरी माओवादी लाई पनि टिक्न दिइएन । यता राजतन्त्र लाई पनि टिक्न दिइएन ।
सत्तामा हुनु र नहुनु नै सबभन्दा ठूलो कुरा होइन यदी जनमतको अपमान र अस्थीरता नै चाहने हो भने? एक पटकको जनमत पाँच वर्षको लागी हो भन्ने तथ्य स्वीकार्न नसक्ने हो भने, नकारात्मकताको मात्रै खेती गर्ने हो भने हामी किन प्रणाली चाहिँ यही रोज्ने त? आखिरी प्रणाली पनि त हामी आफैले संबिधान सभा मार्फत बनाएको हौं ।
अब हामी आफैले स्वमुल्यांकन गरौं त एक पटक बिगतका यि सारा अस्थीरता, अराजकता मा हामीले कति योगदान गर्यौ?
हामी नै हौं हामीलेनै यहां स्थिरता आऊनै दिएनौ ।